Waatan Shaxda Uu Ronald Koeman Doonayo Inuu Sumcadii Barcelona Kusoo Celiyo, Rag Culus Oo Iska Waayay & Wajiyada Ku Cusub - Gool24.Net
Waatan Shaxda Uu Ronald Koeman Doonayo Inuu Sumcadii Barcelona Kusoo Celiyo, Rag Culus Oo Iska Waayay & Wajiyada Ku Cusub
Kooxda ree Spain ee Barcelona ayaa u muuqata mid is nadiifin weyn samaynaysa suuqa xagaagan kaddib markii ay horyaalka La Liga u waayeen Real Madrid isla markaana ay qaab foolxum UEFA Champions League ugaga hadheen gacmaha Bayern Munich.
Wakhtigii Camp Nou ee weeraryahan Luis Suarez ayaa u muuqda mid gabi ahaanba soo dhammaaday iyadoo ay wararka ka imanaya dalka Spain sheegayaan in heshiiskiisa gabi ahaanba la kansali doono.
Sidoo kale xiddigaha kala ah Ivan Rakitic, Arturo Vidal, iyo Samuel Umtiti ayaa iyana la filayaa inay qaadi doonto seefta Ronald Koeman oo ay ka bixi doonaan kooxdaas.
Madaxweynaha kooxdaas ee Josep Maria Bartomeu ayaa dhawaan sheegay in Lionel Messi iyo lix ciyaaryahan oo kale ay lama taabtaan yihiin taas oo ka dhigan in isbedel weyni ka dhici karo xagaagan Camp Nou.
Goolhaye Ter Stegen ayaa la sheegayaa inuu ku dhaw yahay heshiis cusub taas oo ka dhigan inuu dookhooda koowaad ee goolka sii ahaan doono, Clement Lenglet ayay macquul tahay in daafaca dhexe lamaane loogaga dhigo Eric Garcia oo Man City kasii socda maadaama Pique hoos u dhacay.
Wajiyada kale ee shaxdan ku cusub ayaa ah Miralem Pjanic oo ay isaga Barcelona kala wareegtay Juventus xilli ciyaareedka dambena ka qayb ahaan doona si lamid ah Gini Wijnaldum oo heshiiskiisa Liverpool dhacayo xagaaga dambe.
Saddexleyda weerar ee shaxdan ayaa ah Lionel Messi oo mustaqbalkiisa shaki ku jiro, Antoine Greizmann oo la filayo in fursad kale la siiyo iyo dhaliyaha Inter Milan ee Lautaro Martinez.